Mauricio Pochettino Child Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Mauricio Pochettino Child Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
LB na-egosi Full Story of a football Manager kasị mara site na aha njirimara; 'Poch'. Anyị Mauricio Pochettino Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Football Manager gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, Na-amalite.
Peter Crouch Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mauricio Pochettino Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Mauricio Roberto Pochettino Trossero mụrụ na 2nd nke March 1972 na Murphy, Santa Fe, Argentina site n'aka Hector Pochettino (nna) na Amalia Pochetino (nne) ndị bụcha ndị ọrụ ugbo.
Onye njikwa Tottenham tolitere n'obodo ya nke a na-akpọ Murphy. Obodo ya nke ihe dika ndi mmadu 3,000 no na ala ubi nke Argentina ebe a na ahu ugbo dika isi ulo oru.
Paul Gascoigne Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma nke oma
Pochettino a mụrụ ya n'ezinụlọ ndị na-arụ ọrụ ugbo bụ ndị rụworo ala ahụ ruo ọgbọ atọ. Ọ malitere ọmụmụ ya n'otu ụlọ ọrụ ugbo ọkachamara tupu ya amalite ịgba chaa chaa.
Pochettino na-ele football anya site na nwata. Ya na ụmụnne ya ga-eji nna ha egwuri egwu kwa mgbede mgbe nne ha kwadebere nri abalị, ọ na-esikwa ike mgbe niile ịhapụ nwata ahụ na bọl.
"Anọ m na-egwu bọl na ala - n'ọhịa," ọ sịrị…
“Akpụkpọ ụkwụ m nwere nnukwu oghere ná mkpịsị ụkwụ m, m na-echetakwa otu foto m hụrụ n’anya. Adị m afọ abụọ, ejiri bọl ahụ n'aka m, ejidekwa m ya dịka ọ bụ akụ m.
Ọ bụ foto mmetụta uche nye m n'ihi na nke ahụ bụ ihe na-anọchi ndụ m. Ihe niile mere mgbe nke a gasịrị na ndụ m bụ maka bọọlụ a. ”
N'afọ iri anọ mgbe e mesịrị, ìgwè ndị Pochettino, (Tottenham) na-achụso bọl ahụ na ụba nke ndị dinta bara ọgaranya. Ọ na-ahọrọ ịhọrọ ha na-eto eto ma kụziere ha otú ha ga esi esi bulie elu elu ma merie bọl ahụ n'ebe dị ize ndụ.
Mousa Dembele Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Mauricio Pochettino Ndụ Ezinụlọ:
Ndị nne na nna Pochetino bụ ndị ọrụ siri ike. Nna ya Hector gwara Bleacher Report.
Anyị na-arụ ọrụ mgbe niile. Ọbụna mgbe nwa anyị nwoke na-egwu bọl, ọ ga-alaghachi n'oge ya n'efu iji nyere aka rụọ ọrụ ala. "
Nne ya Amalia kwukwara: Mgbe ụfọdụ ụmụ m tọrọ, ọ bụrụ na Mauricio na [nwanne ya nwoke nke okenye] Javier nwere egwuregwu n'otu ụbọchị, otu n'ime ha na-egwuri egwu ma onye nke ọzọ ga-anọ n'azụ rụọ ọrụ ahụ. ”
Hector, o juru nna ya anya na nwa ya nwoke ghọrọ onye nchịkwa.
“Dị ka onye ọkpụkpọ, ọ na-agwa ndị nkụzi ya okwu mgbe niile. Ọ na-enwe echiche mgbe niile, ”ka o kwuru. “Ọ na-egwuri egwu n’okpuru ọtụtụ ndị nkụzi a ma ama, ha niile nyere ya ezigbo ndụmọdụ. O nwere ezigbo uba igwu egwu n'okpuru ndi mmadu ndi ghotara football.
Ọrụ mmanye nyere Pochettino aka ịzụlite ụlọ siri ike na nke ụlọ ahịa nke mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ dị egwu n'oge ya. O nyekwara ya ngwá ọrụ anụ ahụ na nke uche dị mkpa iji tinye onwe ya n'ọrụ na-arụ ọrụ nke onye isi nchịkwa.
Mauricio Pochettino Ndụ Mmalite - Otu Njem Football Si Malite:
Ọ malitere mgbe onye nchịkwa Argentine mara mma MarcAKA 'El LocO 'Bielsa akpọre Murphy na ndị nwụrụ anwụ n'abalị. Nke a mere n'etiti 1980 mgbe Pochetino bụ nanị 13.
Ebumnuche ya bụ ịchọta ndị na-agba bọọlụ dịka akụkụ nke mmepe ntorobịa na mba ahụ. Nhọrọ ya ileta obodo Pochetino dị njọ.
Kyle Walker-Peters Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Ndị Na-eme Ememe
Marcelo Bielsa asị na-efe efe, mana echepụtara na enwere obodo dị na ime Argentine aha ya bụ Murphy nke ga-enwe ntụsara ahụ ị gafere n'abalị ahụ.
Ọ bụ 2am na Mọnde mgbe Bielsa kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ụlọ Pochettino ya na ndị ọzọ. Ọdịnihu onye nlekọta Spurs bụ 13, na-ehi ụra ngwa ngwa.
Bielsa nwere aha dị ka ihe dị mma, na akụkọ ahụ na-ajụ ndị nne na nna Pochettino ma ọ ga-ahụ ụkwụ nwa ha na-ehi ụra. "Ọ dị ka ndị ịgba ọsọ, ndị ahụ bụ ụkwụ ndị ịgba ọsọ," Bielsa kwupụtara na kwuru, ọ bịanyekwara aka na ya n'ebe ahụ.
Jan Vertonghen Child Story Plus Ihe na-emeghi ka ihe omuma
Pochettino egwu. "Ee, nke ahụ bụ eziokwu. M tetara n'ụtụtụ ma mama m kọwaara akụkọ ahụ. M kwuru, sị: 'Bịa, ọ bụ nrọ gị. Gịnị ka ị na-aṅụ tupu ị lakpuo ụra? '"
Nke a bụ otú nwa Argentine si malite ọrụ ya na Newell's Old Boys - otu ụlọ ọrụ Rosario nke nyere ụwa Lionel Messi.
Mauricio Pochettino Biography - Ọganihu na Ihe Mmụta Mụtara:
Mmetụta Bielsa gara n'ihu ịkpụzi ọrụ Pochettino - ọ kwagara Rosario na 14 iji zụọ ya na Newell, na-abanye n'ime ndị otu mbụ mgbe Bielsa ghọrọ onye nchịkwa na 1990, tupu ọ kwaga Europe maka igwu egwu Espanyol, Paris Saint-Germain na Bordeaux.
Lucas Moura Nwa akụkọ akụkọ na-akọwaghị eziokwu
Ihe mkpuchi 20 niile nke mba ya - gụnyere 2002 World Cup bịara n'okpuru Bielsa. N'otu ụwa ahụ, o kwetara ntaramahụhụ maka mmejọ Michael Owen.
"Mgbe ụfọdụ, ọ dị gị mkpa inwe obi ike," ọ na-ekwu, na-atụgharị uche na ihe omume ahụ, bụ nke otu Bielsa na-apụ apụ na-enweta site n'aka ndị na-agụ akwụkwọ. “Mgbe ụfọdụ, ọ dị gị mkpa itinye ihe egwu.
N’oge ahụ, ha tụkwasịrị obi n’otu onye bi n’ógbè ahụ. Ha kwenyere, ha tinyekwara ihe egwu, wee gaa obodo m.
Ha dikwa obi ike, n'ihi na n'elekere abụọ nke ụtụtụ ka ha kụọ aka n'ọnụ ụzọ nke ụlọ n'etiti enweghị ebe, ị na-etinye onwe gị n'ihe egwu - ụfọdụ nkịta nwere ike ịbịa taa gị - ha nwere obi ike ma ọ bụ akụkọ pụrụ iche . ”
Enwere ihe ukwu dị iche iche maka ndị Spurs na-egbukepụ egbukepụ. Pochettino na-agwa ndị egwuregwu ya ka ha nwee obi ike ma nwee ihe ize ndụ, dị ka Bielsa na-akụ n'ọnụ ụzọ onye ọbịbịa - na igwu egwu na obi, dika nwata nwoke ahụ nọ na foto ahụ, o gosiri ha oghere n'ime akpụkpọ ụkwụ ya na bọl aka ya.
Mauricio Pochettino Biography Eziokwu - Ọrụ na Nchịkọta:
Mauricio Pochettino malitere dị ka onye nnukwu, onye siri ike, onye siri ike, onye na-agbachitere nkà ma nwee nkà n'oge mbido ọrụ ya n'oge 13.
Ọ malitere ịrụ ọrụ na Newell's Old Boys ka ọ kwaga na Esplanol nke Catalan na 1994-1995 ebe ọ nọrọ ebe ahụ maka afọ 7, bụ ebe ha nwetara aha Copa Del Ray na 2000.
Pochettino kpaliri na Jenụwarị 2001 gaa PSG ebe ọ nọrọ ebe ahụ ruo 2003-2004 ịkwaga n'otu mba ahụ gaa Girondis de Bordeaux, ebe ahụ ọ nọrọ oge abụọ na ọkara.
A na-akpọ ya mgbe niile 'Captain Smooth' n'oge klọb ya na PSG na-egwu egwu. A maara ozu ya nke ọma iji nye nchebe ọ bụla megide mmegide ọ bụla ọ na-egwuri egwu.
O mere ngosi 20 na otu ndị mba Argentine, ebe o sonyere na 2002 FIFA World Cup.
Ihe mgbaru ọsọ ụwa ya: Pochettino nyere goolu na Nọvemba n'ihu Spain na egwuregwu enyi na enyi nke egwuregwu jiri 2-0 mechie.
O meriri na mmeri 2002 World Cup n'ihu Paraguay na egwuregwu ahụ mechara 2-2. A maara ya maka idebe ogologo ntutu isi n'oge egwu ya. Otutu ntutu ya agbanweela taa.
Ya na Gabriel Batistuta rapaara n'oge ahụ n'oge ụbọchị ọ na-egwu ụwa. Ha bụ ndị enyi kachasị mma ma mara ha ogologo ntutu.
Foto a bịara mgbe Gabriel Batistuta meriri Nigeria na ọkwa 2002 World Cup.
Pochettino banye na Espanyol na Jenụwarị 2009, n'ihi ya, o duuru otu ahụ ka ọ gwụ na La Liga na 10th ebe. Ma Pochettino ejiriwo Espanyol kwadoro ya na June 30, 2012 site na nkwenye ọnụ.
O mesịrị banye maka Southampton na Jenụwarị 18, 2013. Ọ na - edu ndị ọhụrụ ya iji merie ọtụtụ egwuregwu dị ka Man City 3-1, Liverpool 3-1, na Chelsea 2-1. Ọ bụ onye nkụzi Tottenham dịka ọ na-ede oge.
Chekpụrụ ọrụ Pochettino sooro ya kemgbe ọ bụ nwata. Ọ mepụtara aha maka egwu abụọ ọzụzụ. N'oge gara aga, ọ na-eme ka ndị egwuregwu ya gafere n'elu icheku ọkụ ma na-agbapụ akụ na ibe ha.
"Ọ na - eme ka ị na - ata ahụhụ dị ka nkịta, na n'oge ị kpọrọ ya asị maka ya," kwuru, sị Harry Kane, bụ onye ghọworo Premier Njikọ dị ize ndụ maka oge abụọ na-arụ ọrụ (ka na-agụta). "Ma site na Sunday, ị nwere ekele, n'ihi na ọ na-arụ ọrụ."
Jack Cork, onye na-egwuri egwu n'okpuru Pochettino na Southampton, kwuru “Ọ dị gị ka ịchọrọ obi abụọ maka Pochettino. Anyị na-eche echiche maka ịmịnye ikuku karịa ikuku ahụ iji mee ka ha nwee ume maka nrụgide na-adịghị agwụ agwụ. ”
Ma Pochettino na-asụgharị ya n'ụzọ dị iche: Nke ahụ bụ ezigbo atụ. Know mara, anyị na-ekwukarị na bọọlụ bụ ihe gbasara mmụọ - mụ na ndị ọrụ m na-eche na ọ dịka mmetụta Y’oburu n’egwu n’enweghi mmasi, o siri ike iru nnukwu ihe.
Ee, ekwere m na anyị na-achọ ọtụtụ ihe, mana ọ bụghị naanị na-achọ ka onye ọkpụkpọ ahụ gbaa ọsọ, gbaa ọsọ, gbaa ọsọ ma gbaa ọsọ. O siri ike n'ihi na anyị na-akwalite ha imeziwanye ihe, iche echiche, inye ihe kachasị mma n'oge ọ bụla anyị na-anọkọ, nke ahụ na-esiri onye ọkpụkpọ ike. ”
Agbanyeghị Pochettino dị jụụ ma dịkwa jụụ n'ajụjụ ọnụ, enwere akụkọ banyere oge mgbakwasa ụlọ mgbe ụfọdụ - dịka mgbe Septemba 2016 si 2-1 Champions League merie Monaco. Ya Jose Mourinho-enyenede ọwọrọ adaha ada eny i ¯ n eny i ¯ n 'Onye iwe'.
"Enwere m obi ọmịiko, enwere m ike iwe iwe ọkụ n'ọnọdụ" kwetara Pochettino, bụ onye dị afọ itoolu Mourinho. “Taa bọọlụ, ị mara na ọ bụ azụmaahịa - ịgba bọọlụ na azụmaahịa siri ike ikewa.
Mgbe ụfọdụ anyị na-echefu na anyị abụghị ndị nkịtị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ. Anyị kwesịrị idobe mmetụta uche na mmetụta anyị nwere mgbe anyị bụ ụmụ nwoke. Ọ bụrụ na i chefuo nke ahụ, ị ​​gbanwee agụụ gị ka ọ bụrụ ọrụ, nke ahụ bụkwa ihe kacha njọ maka ọkpụkpọ. ”
Mauricio Pochettino Biography Eziokwu - Otuto maka Erikson:
Onye otu Tottenham Hotspur, bụ Mauricio Pochettino, toro onye na-egwu bọọlụ Danish Christian Eriksen, na-ekpughe aha ọzụzụ ọzụzụ 25 afọ dị ka 'Golazo' n'ihi ike ya na-enweghị ike na-esi na ogologo oge.
"Christian Eriksen bụ Onye Pụrụ Iche Anyị", ka Tricham's Mauricio Pochettino kwuru.
“Ọ dị jụụ, jụụ, ọ bụ ezigbo mmadụ mana ọ hụrụ football n'anya. Ọ bụ onye ọkpụkpọ na-achọghị nzaghachi dị ukwuu site na ndị Fans, ndị mgbasa ozi, ndị nọ n'èzí.
Ọ na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe nile, ọ bụ onye nwere obi ụtọ na m masịrị ya nke ukwuu n'ihi na ọ chọghị ka a mata ya. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ka ọ hụ anyị n'anya n'ime klọb. Nke ahụ na-amasị m nke ukwuu. ”
Kostas Tsimikas Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Takehiro Tomiyasu Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Akara Diary Argentine
Japhet Tanganga Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Tanguy Ndombele Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Ryan Sessegnon Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu